12 × 18 Podcast: Dhegeystayaashu Way Weydiiyeen Waanan Ka Jawaabay | Waxaan ka socdaa mac
Qeybtan cusub ee #podcastApple waxaan rabnay inaan ka jawaabno su'aalaha dhagaystayaasheena ee maxaan ugu dhihi lahayn, "daal wada jir" Kanaalka Telegram. Munaasabaddan kooxdu waxay isku dhiibtay adeegga dhammaan kuwa weydiistay iyo waxaan isku dayeynaa inaan sida ugu fiican ugu dadaalno jawaabaheena.
Shaki la'aan, haysashada koox la mid ah tan aan ku leenahay Telegram waxay noo ogolaaneysaa inaan sameyno noocan ah Podcast taas oo aan dooneyno in aan waxoogaa ku soo dhawaano, wax si cad aan ujeclahay oo taasna ay sabab u tahay guushii barnaamijkii shalay ee tooska ahaa waxaan aaminsanahay inaad adiguba jeclaatay.
Xusuusnow inaad si toos ah noola socon kartid habeen walba oo Talaado ah, adoo toos uga socda kanaalkayaga YouTube ama sug dhowr saacadood, illaa codka podcast-ka laga helayo iyada oo loo marayo iTunes. Haddii aad hayso wax su'aalo ah, weydiimo ah ama soo-jeedin ah oo ku saabsan bar-tilmaameedkayada, waxaad kaga faaloon kartaa si toos ah iyada oo loo marayo sheekeysi ayaa laga heli karaa YouTube, adoo adeegsanaya hashtag #podcastapple on Twitter ama sidii aan bilowgiiba ku sheegnay kanaalkayaga Telegram.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxa ugu fiican ayaa ah inaan abuureyno bulsho weyn oo isticmaaleyaal ah waana wax u fiican qof walba inaad wax ku biiriso hadhuudhkaaga ciidda ah. Waxaan ku faraxsanahay inaan habeenno Talaado ah ka hadalno waxa aan jecelnahay inkasta oo maalinta ku xigta aan jacayl u qabno marka ay qaylo-dhaantu kacdo. Haddii aad awoodid, waa noo muhiim taas na sii qiimeyntaada ku saabsan iTunes, Duufka sare ama qalabka wax lagu dhegeysto ee aad u adeegsato inaad na dhageysatoSida iska cad, haddii aad la wadaagto podcast-ka asxaabtaada iyo kuwa aad taqaanaba si ay noo dhageysan karaan, sidoo kale waan u qiimeyn doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » 12 × 18 Podcast: Dhegeystayaasha Weydiiyaan, Waan Ka Jawaabaynaa
Waad salaaman tihiin asxaabta. Waxaan isku dayaa inaan ku xirnaado kanaalka Telegram waxaana helaa fariintan: Isticmaalahan uma muuqdo inuu jiro. Ma lahaan lahayd xiriir toos ah ama beddelaad ah oo aad isku daydo? Mahadsanid
Jawaab Pablo Rodriguez
Waxay umuuqataa in dhamaadka uu qaldanaa, k,
TMSC waxay soosaaraysaa waxyaabo yar yar oo OLED ah oo loogu talagalay mustaqbalka "Apple Glass"